Yakareruka Yakagadziriswa Chinja Vagadziri & Vatengesi - China Rakagadziriswa Managed Chinja Fekitori
ES420-26P L2 Gigabit Nyore Management Management Kuwana Chinja
DCN ES420-26P iri Gigabit Inotarisirwa Ethernet Chinja, ichipa 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 uye 2 SFP zviteshi. Chiteshi chega chega chinotsigira otomatiki MDI / MDIX basa, uye inogona kuwana waya-yekumhanyisa kutumira. Iyo ES420-26P switch ndeye yakazara-gigabit Layer 2 network manejimendi maneja switch uye yakagadzirirwa zvakasununguka pakuvaka yakakwira-inoshanda gigabit network. Iyo inopa yakazara chengetedzo dziviriro sisitimu, yakazara QoS marongero, uye akapfuma VLAN mabasa. Zviri nyore kubata uye kuchengetedza, uye ma ...
ES420-10P L2 Nyore Management Management
DCN ES420-10P inopa 8 * 10/100 / 1000M auto MDI / MDIX basa pamwe ne2 * SFP chiteshi iyo inogona kuona waya-yekumhanyisa kutumira. Inogona kutsigira ACL yakavakirwa pachiteshi, kuti ibudirire kuita network yekutarisa, kudzora traffic, kutanga kutaura uye traffic kumberi; tsigira STP / RSTP / MSTP L2 yekudzivirira tekinoroji tekinoroji, inovandudza zvakanyanya chinongedzo redundancy kugona, simbisa network kugadzikana; tsigira ACL yakavakirwa panguva renji kuti uwane chaiyo yekuwana kutonga nyore; tsigira 802.1x kuvimbiswa kunoenderana neMAC uye p ...
ES420-26P-POE L2 Gigabit Rakareruka Management PoE Kuwana Chinja
ES420-26P-POE iGigabit inotarisirwa PoE Ethernet switch chigadzirwa chakagadzirwa neDCN, ichipa 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 uye 2 Gigabit SFP zviteshi, doko rega rega rinotsigira otomatiki MDI / MDIX basa, uye rinogona kuwana waya-yekumhanyisa kutumira. Ese 24 emachiteshi anotsigira PoE basa rinoenderana neIEEE 802.3at standard uye iri kumashure inoenderana ne802.3af. ES420-26P-POE inogona kushandiswa semagetsi ekutsvaga michina, uye inokwanisa kuona otomatiki uye kuona chishandiso chine simba chinosangana neyakajairwa uye inopa p ...
ES420-10P-POE L2 Nyore Management Management PoE Chinja
ES420-10P-POE inogona kupa 8 * 10/100 / 1000M auto MDI / MDIX basa pamwe ne2 * SFP chiteshi iyo inogona kuona waya-yekumhanyisa kutumira. Iyo-yekuzvigadzira yakazara yakazara Gigabit Layer 2 network manejimendi switch inoitirwa kusimudzira zvinodiwa zvepamusoro-kuita Gigabit yekuwana network, seWIFI AP, IP kamera, IP foni uye mamwe marudzi emidziyo. Iyo ine 8 yakazara Gigabit RJ45 madoko, uye inogona kupa yakazara senge QoS zano, yakapfuma VLAN mabasa uye yakapusa manejimendi uye kugadzirisa, ese maficha m ...